पोखरामा असल अभिभावकीय कला सेमिनार हुने – Arthik Awaj
पोखरामा असल अभिभावकीय कला सेमिनार हुने
By आर्थिक आवाज २०७४ फाल्गुन १६ गते बुधबार ११:२३ मा प्रकाशित
पोखरामा शुक्रबार असल अभिभावकीय कला सेमिनार हुने भएको छ । असल अभिभावक बन्नका लागि आवश्यक पर्ने कलालाई लक्षित गरी सेमिनार आयोजना गर्न लागिएको हो । लायन्स क्लब अफ पोखरा फेवा फिस्टेल सिटी, पोखरा ग्रिन सिटी र पोखराका फेवा सिटीको आयोजना तथा व्यवस्थापन सेमिनार हुन लागेको हो । पोखरा सभागृह हलमा दिउसो १२ः३० बजेबाट सेमिनार सञ्चालन हुने पोखरा फेवा फिस्टेल सिटीका अध्यक्ष केदार ढकालले जानकारी दिए ।
उत्प्रेरक व्यक्तित्व उपेन्द्र अधिकारीले सेमिनारमा प्रस्तुति राख्नेछन् । कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पोखरा ग्रिन सिटीका अध्यक्ष कुलचन्द्र बरालले जानकारी दिए । नविनतम शैलीबाट सामाजिक काम गर्ने उद्देश्यले सेमिनार आयोजना गरिएको उनले बताए । ‘निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकका लागि उपस्थित हुनैपर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं ।’
असल अभिभावकका गुणहरु, असल अभिभावक बन्न केके आवश्यक पर्छ ? बच्चाले भनेको किन मान्दैनन् ? पढाईमा किन कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ? बालबालिका प्रति घरपरिवार र समाजकोे दायित्व केके रहन्छ ? नेतृत्व लिनसक्ने बालबालिका कसरी उत्पादन गर्ने ? लगायत विषयहरुमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक शैलीबाट सेमिनार सञ्चालन हुने ढकालले जानकारी दिए । ११ वटा नाटकहरु समेत सेमिनारमा प्रस्तुत हुनेछन् ।